Doorashadii oo lagu celinayo | Somaliska
Doorashadii ka dhacday Sweden bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa qeybo ka mid ah dalka dib loogu noqonayaa ka dib markii la sheegay in wax qaldameen. Qeyb ka mid ah Örebro iyo guud ahaan Gobolka Västra Götaland ayaa dib loogu noqon doonaa doorashada. Sida uu sheegay gudiga dib u eegida doorashada (Valprövningsnämnden) qaladaadka ka dhacay gobolka Västra Götaland ayaa ahaa mid aad u weyn oo laga yaabo in uu saameeyay natiijada doorashada. Xulufada xisbiyada talada haya ayaa labo kursi oo keliya ay ka dhimanaatay si ay u helaan aqlabiyad ay ku hogaamiyaan baarlamaanka, haddii isbedel weyn ka dhaco doorashooyinka lagu celinayo ayay macquul tahay inay helaan aqlabiyadaas.
Doorashadii ka dhacday Sweden bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa qeybo ka mid ah dalka dib loogu noqonayaa ka dib markii la sheegay in wax qaldameen. Qeyb ka mid ah Örebro iyo guud ahaan Gobolka Västra Götaland ayaa dib loogu noqon doonaa doorashada.
Sida uu sheegay gudiga dib u eegida doorashada (Valprövningsnämnden) qaladaadka ka dhacay gobolka Västra Götaland ayaa ahaa mid aad u weyn oo laga yaabo in uu saameeyay natiijada doorashada.
Xulufada xisbiyada talada haya ayaa labo kursi oo keliya ay ka dhimanaatay si ay u helaan aqlabiyad ay ku hogaamiyaan baarlamaanka, haddii isbedel weyn ka dhaco doorashooyinka lagu celinayo ayay macquul tahay inay helaan aqlabiyadaas.